Ogaden News Agency (ONA) – Baroordeeqda Meles Zanawi ujeedada ay ka leeyihiin TPLF !!
Baroordeeqda Meles Zanawi ujeedada ay ka leeyihiin TPLF !!
Ugu damabayn cadaabkii uu Ilaahay ugu talagalay ayaa loo sii qaaday Meles shalay, qofkii jeclaa iyo midkii u ooyay iyo midkii u tacsiyeeyayba waxaan leenahay halkii la geeyay uga daba tag Ilaahay idinkii.
Dad badan oo ku nool caalamka gaar ahaan dawladaha dariska ah ayaa dhabanada haysta oo isweydiinaya maxay tahay ujeedada ka dambeysa baroordiiqdan xad-dhaafka ah ee malaayiinta doolar lagu khasaariyay ee socotay 2bada todobaad. Su’aal kale oy isweydiinayaan Somalida gaar ahaan ayaa ah; Meles zanawi sow midkaan naqaanay ma’aha ee gumaaday shacabka Somaliyeed?
Inta aynaan hoos ugu sii daadagin baadhitaanka su’aalahaa, sheeka uu qoray ninkii dhaqtarka u ahaa Fircoon ka mid ah Faraaciintii Masar oo laga helay qubuurahii ay isku aasi jireen ayaa sidan u dhignayd;
Waxaa jiray nin maalqabeen ah oo dhistay guri weyn oo aad u quruxsan. Fircoon ayaa maalin soo agmaray oo jeclaaday gurigii. Maalintii dambe ayuu askartiisii u diray ninkii maalqabeenka ahaa oo ku yidhi guriga ku soo wareeji Fircoon. Ninkii ayaa yarehe diiday oo codsaday in waqti la siiyo uu guri kale ku dhisto. Fircoon oo arintaa ka cadhooday ayaa amray in maalkiisa oo idil la dhoco isagana gacan iyo lug is-dhaaf ah la gooyo. Sidii ayaana la yeelay. Ninkii oo suuqa yaala oo dadka ay cunto ku siiyaan halkaa ayaan soo agmari jiray buu yidhi dhakhtarka qoray warqadda la helay. Markaasaan ku odhan jiray; “Iska sabir markuu dhinto Fircoonkan ayaa laguu soo celin doonaa xoolahaagee.” Maalintuu dhintay Fircoon ayaan orday saan ugu bishaareeyo ninkii. Waxaan u tagay buu yidhi isagoo barooranaya oo ciida isku shubaya. Intaan yaabay ayaan u tagay oon ku idhi; “Sow ninkii hebel ahaa ma tihid”. Wuxuu iigu jawaabay buu yidhi; “Iga aamu, hadaan ogaaday in aan khaldanaa.” Dhakhtarka oo sii wata hadalkiisa ayaa qoray; ninkan waxaa ka yaabiyay markuu arkay askartii Fircoon iyo dadkii suuqa joogay oo wada barooranaya ayuu ishayn kari waayay oo isagiina uu ku daray oo iloobay dulankii loo gaystay.
Malagayaabaa bugtada laga soo jafay isbitaalada Itobiya oo qaarkood ayagoo luga la’aan ah lagu jiidayay kursiga, inay qaarkood la mid ahaayeen ninkii maalqabeenka ahaa ee Fircoonkii dhacay u ooyay.
Kollayba waxa ka dhacay Ogadenya ee dadweynaha lagu qasbay inay ilma iska keenaan, oo wadaadadii xarooday qaarkood lagu qasbay inay u duceeyaan Meles oy kala mid dhigaan boqorkii Najaashi (RC), waxay la mid tahay un arintaa uu dhakhtarkii Fircoon ka soo sheekeeyay. Hasa ahaatee qaar culuma ah ayaa laga sheegay inay yidhaahdeen waxaan maqalnay inuu hoosta ka ahaa muslim Zanawi, sidaa darteed ayaan ugu ducaynaynaa. Nasiibdarada ku dhacdayse kuwaa, waxaa la geeyay bakhtigii Zanawi Kaniisada Adisababa inay halkaa ugu tageen oo la qarinayona waa laga yaabaa.
Waxaase la hubaa inuu u duceeyay Meles wadaadkiisii (sawirka hoose) oo la sheegay murugo darteed inuu la dhintay isagiina shalay, sida ay soo wariyeen saxaafadda dalkaa.
Nidaamka ku shaqeeya cabudhinta iyo cadaadiska iyo dulmiga oo raba inuu nidaamkii dhisnaa sii socdo oo aan dib loo baadhin dulmiga iyo dhibaatada uu gaystay Diktaatoorka dhintay ayaa siyaabahaa ugu baroor-diiqa, si shacabka aanay u dalbanin nidaam ka badalan midkii hore. Waxaa caalamka u cadaatay in xukunka TPLF uu la mid yahay midka ka jira Waqooyi Kuriya (North Korea) oy doonayaan aqaliyadda Tigreega ee xukunka haysata inay Itobiya dib ugu celiyaan xukun qoys (Family dynasty).
Waxyaabaha ka socday Itobiya maalmihii la soo dhaafay, iyo kharashka la galiyay aaska iyo baroor-diiqda wuxuu ka yaabiyay dawlada badan oo Itobiya saaxiib la’ahaa, gaar ahaan dawladaha reer galbeedka, oo laga yaabi lahaa inay ka soo qaybgali lahaayeen aaska KT Meles Zanawi, hasa ahaatee sharaftooda ka ilaashaday markay fahmeen ujeedada TPLF oo soo diray wufuud aad u hooseysa.
Waxay aad xooga u saareen kooxda xukunka haysata inay shacabka Itobiya ka gadaan inuu Meles ahaa hogaamiye (zaciim) caalami ah oo dhamaan caalamka looga ooyayo. Sidaa darteed ayay dawladaha caalamka ka codsadeen in looga yimaado, gaar ahaan dawladaha Afrika si loo yidhaahdo wuxuu ahaa Hogaamiyaha 1aad ee Afrika, ka dibna ninka dhaxli doonana uu kursigaa ugu fadhiisto.
Qoraaladeena dambe ayaan ku eegi doona gaar ahaan wixii ka dhacay Ogadenya iyo sida dadweynaha loo gadhsiiyay heer ay diintii iyo akhlaaqdiiba uga tagaan.